GMP kwụrụ maka Ezi Ntupụta Ọrụ, Usoro ndị akwadoro na-ahazi mgbanwe dị iche iche yana ihe kachasị dị mkpa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Gụnye ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri, n'ichepụta ụlọ ọgwụ, ihe ịchọ mma, wdg. Ọ bụrụ na azụmahịa gị ma ọ bụ nzukọ gị chọrọ otu ụlọ ma ọ bụ karịa, ọ dị oke mkpa ịnweta usoro HVAC nke na-achịkwa gburugburu ebe obibi ma na-ejigide ụkpụrụ kachasị elu nke ikuku. Site na ọtụtụ afọ nke ahụmịhe ụlọ ọcha, Airwoods nwere nka iji hazie ma wuo ụlọ ọcha maka ụkpụrụ kachasị sie ike n'ime usoro ma ọ bụ ngwa ọ bụla.
HVAC chọrọ maka Cleanroom
Roomlọ nhicha bụ oghere a na-achịkwa gburugburu ebe obibi nke na-enweghị ntụpọ gburugburu ebe obibi dị ka uzuzu, ikuku na-efe efe, microbes ma ọ bụ vapors chemical, dị ka atụpụtara na ahụ kwa cubic mita.
Enwere ọkwa dị iche iche nke ụlọ ọcha, dabere na ngwa ahụ yana etu ikuku ga-esi ghara imetọ ikuku. A chọrọ ụlọ mposi n'ọtụtụ ngwa nyocha dị ka biotechnology, ọgwụ na ọgwụ, yana imepụta ngwa elektrọnik ma ọ bụ akụrụngwa kọmputa, semiconductors na akụrụngwa aerospace. Roomslọ mposi chọrọ sistemụ pụrụ iche nke ikuku, nzacha na ọbụlagodi ihe mgbidi iji mee ka ikuku dị na ọkwa enyere. N'ọtụtụ ngwa, iru mmiri, okpomọkụ ma ọ bụ njikwa ọkụ eletrik nwekwara ike ịhazi.
Applọ Ọrụ Ngwaọrụ Ahụike
Foodlọ Ọrụ Nri
Centrallọ Ọgwụ Central Central
Factlọ ọrụ ọgwụ
Anyị Cleanroom Air njikwa Unit, N'uko Systems, na hazie Cleanrooms dị mma maka ụlọ ọrụ na-achọ particulate na mmeru management na cleanroom na laabu gburugburu, gụnyere ọgwụ n'ichepụta, chebaara electronic n'ichepụta, ọgwụ na ahụ ike labs na nnyocha emmepe.
Ndị injinia na ndị ọrụ ntanetị nke Airwoods bụ ndị ọkachamara ogologo oge n'ịmepụta, iwu ụlọ na ịwụnye ụlọ nhicha omenala na nhazi ọ bụla ma ọ bụ ọkọlọtọ ndị ahịa anyị chọrọ, na-emejuputa mkpokọta nke nhichapụ HEPA dị mma na teknụzụ ikuku dị elu iji mee ka ime ahụ dị mma ma bụrụ nke enweghị mmetọ. N'ihi na ụlọ na-achọ ya, anyị nwere ike iwekota ionization na dehumidification mmiri n'ime usoro mezie mmiri na static ọkụ eletrik n'ime ohere. Anyị nwere ike ịmepụta ma wuo softwall & hardwall ụlọ ọcha maka obere oghere; anyị nwere ike ịwụnye ụlọ ntanetị dị ọcha maka ngwa ndị ka ukwuu nke nwere ike ịchọ mgbanwe na mmụba; na maka ngwa ndị na-adịgide adịgide ma ọ bụ nnukwu oghere, anyị nwere ike ịmepụta ebe a na-ekpocha ihe iji debe ngwa ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ọ bụla. Anyị na-enyekwa otu ọrụ nkwakọ ngwaahịa EPC zuru oke, ma dozie mkpa niile nke ndị ahịa na ime ụlọ dị ọcha.
Enweghị ohere maka njehie mgbe a bịara n'ịmepụta na ịwụnye ụlọ ọcha. Ma ị na-ewu ụlọ mkpocha ohuru site na ala ma ọ bụ na-emezigharị / gbasaa nke dị ugbu a, Airwoods nwere teknụzụ na nka iji hụ na emere ọrụ ahụ na nke mbụ ya.
ISO 8 Cleanroom Maka Australia oslọ Ọrụ Ngosiputa Ngwa
8lọ nhicha ISO8 maka Ethiopian Airlines
Bangladesh Na-afụli Nri Na-edozi Nri Dị ọcha
Ghana na-ehicha ebe a na-ehicha mmiri
Ihe ọ Cleanụ Cleanụ Cleanroom Workshop Pepsi Cola Project
Roomlọ oriri na ọ Controlụ &ụ nri na ọgwụ ọjọọ